Maraakiib jariif oo ajnabi ah oo yimid xeebta Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaraakiib jariif oo ajnabi ah oo yimid xeebta Boosaaso
February 21, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maraakiib jariif oo ajnabi ah oo yimid xeebta Boosaaso. [Sawirka: Archive]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ilaa iyo todobo maraakiib jariif ah oo ajnabi ah ayaa lagu soo waramayaa in ay dhawaan soo gaareen xeebta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Maraakiibta ayaa ruqsad ka helay dowladda Puntland in ay ka kalluumaystaan halkaas, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo dowladda ah.
Ilo-wareedyada oo codsaday in aan magacooda la sheegin, ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in Wasaaradda Kalluumaysiga Puntland ay maraakiibtaas u ogolaatay in ay xeebahaas ka kalluumaystaan.
Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen maraakiibta ayaa waxaa laga leeyahay dalalka Koonfurta Kuuriya iyo Thailand, waxaana heshiis la galay masuuliyiinta sare ee Wasaaradda Kalluumaysiga iyo ganacsato deegaanka ah.